Ahlu Sunna oo si adag u beenisay eedeyntii loo soo jeediyay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ahlu Sunna oo si adag u beenisay eedeyntii loo soo jeediyay
Ahlu Sunna oo si adag u beenisay eedeyntii loo soo jeediyay
Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe ayaa si adag u beenisay inay diiday dadaaladii ay garwadeenka ka ahaayeen Saraakiisha Ciidamada Dowladda, ee maalmahaanba dhexdhexaadinta ka dhex waday iyaga iyo Maamulka Galmudug.
General Aadan Abshir Nuurre (Laba Afle) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka, isla-markaana hoggaaminayay Saraakiishaasi ayaa sheegay inay Ahlu Sunna ka diiday wax walba, oo sida uu sheegay ay u sheegeen.
General Aadan Abshir Nuurre oo Axaddii shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Dhuusamareeb ayaa yiri “Saraakiil ka tirsan Dowladda Dhexe oo aan ka mid ahaa ayaan u joognay muddo 12 cisho ah deegaanka Bohol, si aan ugala hadalno Ururka Ahlu Sunna in wada hadal lagu dhameeyo wax walba, balse waan ku guuldareysanay oo Ahlu Sunna wax walba oo aan u sheegnay, waa ay naga diideen.”
General Laba Afle ayaa xusay in Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) uu ka ogolaaday waan-waanta ay wadeen wafdiga Saraakiisha ah, sida uu yiri.
Madaxa Arrimaha Siyaasadda ee Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe, Cabdisalaan Aadan Xuseen ayaa sheegay in Saraakiishan aanay qayb ka ahayn wada hadal uu sheegay inay daba-yaaqadii bishii hore ee October uga soo baxeen Magaalada Guriceel, oo 1-dii bishaasi ay gacan ku haynteeda kala wareegeen Galmudug.
Cabdisalaan Aadan Xuseen oo BBC la hadlay ayaa marka hore yiri “Ahlu Sunna Waljameeca, Guriceel waxay uga soo baxday wada hadal iyo wada xaajood, waxayna sugeysay mar kasta wada xaajood iyo si nabad ah in wax lagu wada dhameysto, mar kastana Ahlu Sunna Waljameeca waxay ku baaqdaa wada hadal iyo nabad.”
Waxa kaloo uu yiri “Waan maqlaynay in la yiri Ahlu Sunna Waljameeca waa diiday wada hadalkii. Dadkii wada hadalka Guriceel noo keenay ee ganacsatadii, siyaasiyiintii, waxgaradkii iyo culima’udiinkii ahaa, illaa hadda wax jawaab ah ayaga ayaan ka sugaynaa, illaa haddana nooma aysan sheegin.”
Cabdisalaan Aadan Xuseen ayaa yiri “Waxaan maqlaynay nin janaraal ah oo deegaanka u dhashay in uu yiri Ahlu Sunna Waljameeca waa diiday wada hadalkii, waxa naloo keenayna ma uusan sheegin.”
Su’aal ahayd ma jiraan qodobo uu guddigaa hoggaaminayay janaraalka ay idiin soo bandhigeen ayaa ku jawaabay “Horta sidaydaba janaraalka hadaladiisa waxaa ka mid ahaa Madaxweynaha Galmudug baan marnay, waxaa kaloo ka mid ahaa anagga cid na soo dirtay maleh, anaa iskay u imid, maadaama aan janaraal ahay, deegaankana aan u dhashay. Tan labaad qodobo uu anaga noo keenay oo Galmudug uu nooga keenay oo hadda la taaban karo ama dadka loo sheegi karo ma jirto.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri “Waxa keliya oo anaga aan ka xusi karno hadaladiisii waxaa ka mid ah inuu yiri Madaxweynaha Qaranka Somaliya, Madaxweynaha Galmudug iyo Ra’iisal Wasaaruhu, intaba uma diyaarsana inay idinla hadlaan, wada hadalna idinla furaan, in la idin laayo iyo inaad isaga tagtaan meesha wax ka dhaxeeyo maleh. Taasina haddee dhexdhexaad iyo war la soo jeediyo ma’ahee waxaan u aragnay inay ahayd handadaad.”
Cabdisalaan Aadan ayaa hadalkiisa ku xoojiyay “Ahlu Sunna Waljameeca dad nabadeed oo nabad raadinaya inay yihiin waxaa kuu caddeynaya, ayadoo 15km Caasimaddii Galmudug u jirta ayay illaa iyo hadda ka war sugeysaa culima’udiinkii iyo dadkii dhexdhexaadkaa ahaa ee howsha waday, mar kastana diyaar bay u tahay. Haddee qof anaga noo yimid oo yiri wada hadal baan la galnay, haddii wada hadal ama qodobo naloo keenay ay jiraan waa la sheegi lahaa.”
Previous articleSaddex nin oo loo soo qabtay qaraxii Magaalada Liverpool
Next articleRooble oo la kulmay Hoggaanka Hay’adda Socdaalka & Jinsiyadda